Goobaha Madaweynaha iyo Guulaha Guud ee 100 Maalmaha - TELES MACLUUMAAD
ACCUEIL » COMPANY Goobaha Madadaalada iyo Guulaha Guud ee 100 Maalmaha
Goobaha madaw iyo guulaha shirarka ee maalmaha 100
Qeybta Capitol ee Washington. 116th Congress waxay la socotaa maalmaha 100. (AP Photo / Manuel Balce Ceneta, Faylka)
Astronomers ayaa ku dhawaaqay usbuucan inay ugu dambeyntii arkeen waxa Albert Einstein uu u maleynayey dhowr sano ka hor: godka madow .
Doolow madow waa muraayad foolxun. Fikrado ah wax aan jirin. Godadka madow waxay cunaan wax kasta. Codka. Light. Area. Arrinta. Xitaa waqtiga.
Xuddunta daloolka madow waxaa lagu magacaabaa "horizon dhacdooyinka". Duuf madow waxay ku xirantahay wax kasta oo ka soo horjeeda dhacdooyinka weligiisba.
SIDA DHAQAAL KA DIB MARKII DHAQAAL KA BADAN YAHAY, WAXAY YIHIIN ASTRONAUT OF NASA
Waxaan dhalinay kaliya maalin ah 116ème of Congress . Waa wax dabiiciga u ah Demoqraadiyada ee Golaha si ay u ammaanaan guulahooda boqol maalmood. Demoqraadiyadu waxay haystaan ​​aqlabiyad ballaaran, oo ay ku dheehan tahay qulqulayaal kala duwan. Laakiin jamhuuriyaddu waxay la yaaban yihiin sida dhabta ah ee xisbiga Dimoqraadiga ahi uu dhammaaday.
Jamhuuriyaanka xakamaynta Senate-ka 2015. Jamhuuriyeyaashu waxay ku darsadeen qiyaasta ugu yar ee ay u socdaan. Laakiin Senate-ku wuxuu sidoo kale ku jiraa xarumaha 100. GOP guurtidayaashu way ka xishoodaan sida ay u caddeeyeen musharaxiinta madaxweynenimada Trump. Dimoqraadiyadu waxay xoqan yihiin madaxooda.
Muxuu Golaha Qaranku dhammaystiray sanadkan? 116 Congress wuxuu billaabmay marnaba, markii ay dawladdu dhammaatay hawsheeda - oo ka bilaabantay indhahii hore ee Congress-ka. Ma ahan ilaa bartamihii Febraayo in dhammaan dhibaatooyinka la xidhiidha xiritaanka xafiisyada la xalliyey iyo in sharci-dejiyayaashu ay ugu dambayntii saxiixi karaan 116th Congress.
Miyay dhibaatooyinka waawayn ee maalintii ku yaallaan hareeraha munaasabadda xafladaha shirarka, oo diyaar u ah in la dhexgalo dalool siyaasadeed madow? Ma cadda.
Diyaarinta daryeelka caafimaadka ? Jamhuuriyadaha Kongareeska ah waxay ka wada hadlaan wakhti kasta. Waxay mar walba doonayaan inay iska daayaan Obamacare. Waxay doonayaan in ay Waaxda Caddaaladda hortagaan maxkamad. Si kastaba ha ahaatee, hoggaamiyaha aqlabiyadda ee golaha guurtida Mitch McConnell (R-KY) si toos ah ugama jawaabin codsiga macluumaadka ka yimid Bret Baier, Fox, qorshaha la soo jeediyay. McConnell wuxuu arkay in Golaha Wada-tashigu uu hoos-u-dhac ahaa. Wuxuu intaa ku daray dadaalka hore ee GOP in la tirtiro laguna bedelo Obamacare "ma shaqeyn".
"Ma dooneyno in aan waqti ku qaadano Golaha Guurtida arrimo aan macquul aheyn in ay sharci noqdaan," ayuu yiri McConnell.  Dimoqraadiyadu waxay wax badan ka hadlaan xalalka joogtada ah ee DACA iyo qaddiyadda DREAMers . Hase yeeshee, waxba maaha qorshe ay ku dheehan tahay dimuqraadiyaddan. Qaar ka mid ah, dhibaatooyinka Dimoqraadiyadu la kulmaan DACA / DREAMers waxay la mid yihiin caqabadaha ka dhigaya Jamhuuriyaanka ka baxsan daryeelka caafimaadka. Waxay u fiican tahay warqad iyo weedh yar. Laakiin waa sharci-dejin sharci-dejin ah oo wax lagu qabto.
SEN. KAMALA HARRIS OO KA HELI KARO DAWEYNTA DHAMAADKA DAWLADAHA DAWLADAHA BISHAARKA
Kaabayaasha? Waxba ma jiraan xilligan. Inkasta oo uu Guddoomiyaha Golaha Wakiilku Nancy Pelosi (D-CA) iyo hoggaamiyaha Guurtida ee Senatka Chuck Schumer (D-NY) waxay la kulmayaan Madaxweynaha muddo yar oo ku saabsan kaabayaasha. Qiime aad ku yareyso qiimaha daawooyinka laguu qoray? Waxba ma jiraan xilligan. Jamhuuriyeyaashu waxay weerareen Democrats todobaadkii hore markii ay ku fashilmeen inay isku duubaan si ay u gudbiyaan hindisaha miisaaniyadda ee sanadka 2020.
"Waxaa la soo sheegay in aan lumiyay xakamaynta," ayuu yiri hogaamiyaha Aqalka Sare ee Steny Hoyer (D-MD). ) go'aanka hoggaamiyeyaasha Dimuqraadiga ah inay ka baxaan xirmooyinka miisaaniyadda. Kulanka ayaa ku dhacay kharashka mudnaanta. "Weligeen kuma guuldareysano codeyn aan dooneyno inaan badino. Hase yeeshee, waxaan si cad u qeexnay, ma dhumin doonno codadka todobaadkan haddii aan dooneyno inaan ku guuleysano. Oo waannu guulaysanay. "
Si cadaalad ah, Demoqraadiyadu waxay soo weerareen dhowr ajandeeyn ah haddii ay ballanqaadeen inay codeeyaan haddii codbixiyayaashu ay aqlabiyad badan u dhiibaan - inkasta oo biilashaas badankooda aysan jirin meel ka mid ah golaha.
tallaabad xagjir ah oo udubdhexaadinaysa daahfurnaanta siyaasadeed iyo fududeynta codka muwaadiniinta. Waxay raaceen sharci si ay u adkeeyaan xayiraadda hubka. Dimoqraadiyada Golaha Wakiilada ayaa dhowr jeer u codeeyay in ay dib u furaan xukuumadda muddada xidhitaanka. Waxay aqbaleen tallaabooyin ay ku mamnuucayaan FCC inay dhexdhexaad ahaadaan. Waxay soo saareen biil ay ku dhammeeyaan cadaynta xaaladda degdegga ah ee Madaxweynaha Trump. Laakiin waxay ku jireen codadka 38 meel u dhaw codadka loo baahan yahay si loo tirtiro Mr. Trump's veto ugu horeysay.
Laakiin mar labaad, Jamhuuriyaddaha Senate-ka ma ansixinayaan biilasha, ha ahaadeen kaliya aqalka Cad.
Sidaas darteed ma ahan wax la yaab leh. Jamhuuriyeyaashan ayaa sheegaya in ay ku arkaan xayasiin jasiirad ah oo ku taala aqalka.
"Waa boqol cisho oo wax uun ah," ayuu yiri hoggaamiyaha tirada yar ee Kevin McCarthy (R-CA) ee Dimuqraadiyiinta. "Tani waa Aqalka Maraykanka ee Xeerarka."
McCarthy ayaa sharaxay in xisbiga Democrats ay qaateen qaraarooyin kala duwan oo aan awood lahayn.
"Waxaan heystaa ku filan. Waan ka daalay codaynta qaraarada, "ayaa ka qoomameeyay rookie Anthony Gonzalez (R-OH). "Waxaan codeyn doonaa" iminka "hadda". "
Dabcan, baaritaanka dimoqraadiyada ee maamulka Trump iyo daabacaadda warbixinta Mueller ayaa ku hanjabay in ay ku dabagalayaan guulaha siyaasadeed ee ay Democrats ku dabaaci karto.
Talaado ku taala Golaha. Guddoomiyaha Guddida Garsoorka Jerry Nadler (D-NY), Guddoomiyaha Guddiga Tamarta iyo Ganacsiga Frank Pallone (D-NJ), ayaa ku martiqaadey saxafiyiin shir saxaafadeed ku saabsan maamulka si loo joojiyo nidaamka Obamacare. Laakiin ka dib su'aalo dhowr ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka, su'aalaha ayaa si dabiici ah u baddalay Xeer Ilaaliyaha Guud William Barr iyo Warbixinta Mueller.
Su'aalaha Barr / Mueller ayaa wareysiiyay Katie Hill (D-CA).
Waxaad halkan u joogtaa shir saxaafadeed oo ku saabsan caqabadaha taariikhi ah ee sharciga ah ee ilaaliya malaayiin qof, "Hill ayaa sidaas yidhi. "Waxaa loo doortay Congress-ka, taasina waa sababta (Golaha) u soo jeestay Dimuqraadiyadii si habsami leh oo muhiim ah. Taa baddalkeeda, waxaan haynaa su'aalo ku saabsan arin aan waxba qabin mawduuca aan ku laheyn shirkii jaraa'id. "
Hill waxay wariyeyaashu ku dhaleeceeyeen in ay "diiradda saaraan waxa Maraykanku na soo diray halkan. Tani maaha in laga hadlo warbixinta Mueller. Waxay ka hadlaysaa daryeelka caafimaadka. "
Hill waa sax. Dimuqraadiyadu ma guuleysan abaalmarinta Aqalka ee degmooyinka dagaaladu iyagoo ka hadlaya taliyaha khaaska ah Robert Mueller baaritaanno iyo dhibaatooyin la xiriira madaxweynaha. Dimoqraadiyeyaashu waxay qabsadeen degmooyin badan oo isdabajoog ah iyagoo ka doodaya caqabadaha Obamacare ee ay soo bandhigtay Jamhuuriyaanka. Si kastaba ha ahaatee, illaa iyo hadda, siyaasadda caafimaadka ee Congresska ayaa yaraaday.
HESHIISKA RAISMADA MUWAADINKA MUWAADINKA, MIDOOBAYNTA KOOWAADKA ARRIMAHA LAGA BILAABO RUSSIA
Senatka, McConnell ayaa sameeyay codad badan oo ku saabsan xaqiijinta musharaxiinta madaxweynenimo ee Trump. Wuxuu mar walba ku adkeysanayaa in guurtidu ay qayb ka yihiin "shaqaalaha". McConnell xitaa dhowaan wuxuu soo dhigay habraacyo casri ah si loo fududeeyo xaqiijinta musharaxiinta hooseeya. Hase yeeshee, marka laga reebo xaqiijinta iyo codadka ay ku faanayaan dib-u-furista xukuumadda, codka ugu muhiimsan ee Golaha Guurtida sanadkan waa Heshiiska Cagaaran ee Cusub. McConnell wuxuu rabay Democrats in Senate-ka inuu u tartamo doorashooyinka madaxweynanimada, taageeridda ama ka soo horjeeda Heshiiska New Green. Xildhibaanku xitaa ma dalban karin codadka kaliya in uu bilawdo doodda [New Green Deal] . McConnell ayaa qiray in Fox uu ku dadaalayo in uu ka doodo Heshiiska Cusub ee New Green waa codeyn kooban.
"Waqti ka waqti, dadka waa inay diiwaan geliyaan oo go'aan ka gaaraan haddii ay diyaar u yihiin inay u codeeyaan waxa ay sheeganayaan. ayuu yiri McConnell.
Laakiin Senatadu ma laha biilal badan.
Schumer ayaa sheegaysa in McConnell uu "u beddelay golaha guurtida sharci qabyo ah."
McConnell ayaa shaki galiyay in golaha guurtidu ay wax badan ka qaban karaan guryo dimuquraadi ah. Sidaas awgeed, isaga iyo Jamhuuriyeyaashaba waxay isku dayayaan, inay demoqraadiyada u tuuraan sida ugu hooseeya.
"Waxa la soo bandhigi doono sanadka soo socda waa dood ku saabsan haddii aan dooneyno in aan Mareykanka ka dhigno waddan bulsho ahaan," McConnell ayaa u sheegay Bret Baier.
"Waxaad aragtay barnaamijkan fog-fog," ayaa ku celiyay qoyskooda tirada yar, Steve Scalise (R-LA). "Waxa kaliya ee aad aragto waa isku day lagu hurinayo madaxweynaha."
HALKAN HALKAN KA HELI KARTAA ARDAYDA FOX NEWS APP
Warbixinta Mueller wuxuu ku saabsan yahay in la daabaco ]. Waa amaan si aad u dalbato inta badan saliidaha cusub ee ka soo baxa Washington. Hogaamiyeyaasha Golaha iyo Golaha Senatka ayaa durbadiiba ka fekeraya in ay sameeyaan heshiis ah in ay suuragal tahay in ay ka fogaadaan go'aamada xukuumadda labada sano ee soo socota. Laakiin dad yar ayaa ugu dhakhsaha badan u arkaan habka muhiimka ah ee sharci-dejinta - iskuday biilasha uu Madaxweyne Trump ka gudbi doono.
Hadday taasi dhacdo, waxaa dhici karta in Congress-ka ay soo gali karto qaab sharci ah. Codbixiyayaashuna way isweydiin karaan haddii Capitol Hill ay tahay meesha dhibaatooyinka waaweyni ay ku jiraan wax aan jirin.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.foxnews.com/politics/what-has-new-congress-accomplished-in-first-100-days
RTI, C'midi: Martida waxay ku eedeeyeen kooxda martida loo yahay iyo ka tagay bandhigga